Mety tsara ho an’ireo mpankafy ranomanitra izy ity satria natoraly ary tsy hanindry ny ranomanitrao. Malefaka sady miaro tsara amin’ny hatsembohana ihany koa.
- Diloilo kôkô tsy mitapoka 2 sotro
- Karibonetra 1 sotro
- Vovo-katsaka na “fecule de mais” 2 sotro
- Faikan-tantely 2 sotro
- Lohamenaka (huiles essentielles) izay hanitra tiana 8 mitete
Atsonika amin’ny alalan’ny evo-drano (bain-marie) ao anaty vera ny diloilo sy ny faikan-tantely.
Rehefa mahazo hafanana kely sy mitsonika dia arotsaka ao ilay karibonetra sy vovo-katsaka dia afangaro tsara mba hahazo paty marihitra. Ao aorian’izay vao arotsaka ny lohamenaka izay tianao mialohan’ny hampangatsiaka sy hampivaingana azy indray.
Rehefa manomboka mivaingana indray dia atao ao anaty fitoerana izay tiana, toy ireny fitoerana “deodorant” ireny. Avela ho mandry ao anatiny ao amin’izay, ary azo tahirizina ao anaty vata fampangatsiahina.
Raha tsy mampiasa faikan-tantely kosa ianao dia hiendrika toy ny “crème” ity “deodorant” namboarinao ity.